Mateo Chitsauko 13 inotsanangura Nguva Dzemakereke Manomwe
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mateo Chitsauko 13 inotsanangura Nguva Dzemakereke Manomwe
Mateo Chitsauko 13 inotsanangura Nguva Dzemakereke Manomwe
Makore 2 000 enhorondo yechiKristu akapatsanurwa mumakereke manomwe zvichienderana naMateo chaputa 13.
MATEO 13:1 Nezuva iro Jesu akabuda mumba akanogara pagungwa.
Mahombekombe egungwa akakosha muMagwaro. Mutsetse unoparadzanisa gungwa nenyika yakaoma.
Gungwa rinomiririra vasakarurama, vanhu vazhinji vasina kudzikama vanozunungutswa neshanduko dzinoitika panyika dzakaita sedzekupfeka kana dzidziso. Jecha riri mumahombekombe megungwa rakatemwa kubva padombo pane imwe nguva nekuda kwemamiriro ekunze. Kristu, Shoko, ndiye dombo redu. Vatendi vakazvarwa patsva maari vakaramba vari chikamu cheShoko rake (Magwaro).
1 VAKORINTE 10:4 Vose vakanwa zvekunwa padombo reMweya rakavatevera; dombo iri rakanga riri Kristu.
Saka jecha riri mumahombekombe megungwa rinomiririra vatsvene. Mahombekombe egungwa anomiririra muganhu wegungwa. Mwari anotendera gungwa (vasakarurama) kuenderera zvakanyanya pakuedza kudzikisira kana kuparadza vatsvene (jecha remahombekombe egungwa). Vakarurama vanomiririra muganhu usingakwanisi kudarikwa nevasakarurama.
JOBO 26:10 Akatara muganhu pamusoro pemvura, kusvikira pakuparadzana kwechiedza nerima.
Nyika ino ine miganhu yayo. Zuva renyika rine maawa 24. Chiedza nerima zvinoganhurana kuti chimwe nechimwe chive nemuganhu wacho wenguva. Nyika yakaoma yakaganhurwa kubva kugugwa. Hupenyu hunoganhurwa nerufu. Kumagumo chiedza chichatsiva rima gungwa richanyangarika. Rufu, gungwa nemadeko akasviba zviratidzo zvezvakakanganisika panyika. Izvi zvakakosha pakukura kwedu. Kuomerwa, kuchema, zvivi kukanganisa, hunyengeri, zvenyika nezvimwe zvakadaro zvakakosha pakutiedza, kutisimbisa kutigadzirisa uye kutipa hondo dzekurwisa. Kurwa murairo wekukura. Kukundwa nekuomerwa isando nemvuto zvinokwenenzvera hupenyu kuti tisimbe. Kana tikatendera kukanganisa tinova vakareruka kuenda kunguva yekutambudzika. Saka chakaipa chinhu chingoripo kwekanguvana kuti chitiumbe kuti tive izvo Mwari anoda mukurarama kwedu; kwete zvatinoda isu kuhupenyu hwedu.
ZVAKAZARURWA 21:1 Zvino ndakaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuura; negungwa rakanga risisipo.
ZVAKAZARURWA 21:25 Masuvo aro haangatongozarirwi masikati, nokuti husiku hahwuchazovipo.
Nguva ichauya yekuti hakuchazovi negungwa kana nerima.
Kutadza nezvakaipa zviripo kwekanguvana kusvikira zvapedza basa razvo.
JOBO 14:5 Mazuva ake zvaakatarwa, mwedzi yake yakaverengwa nemi, makamutarira miganhu yaasingatenderwi kudarika.
Hakuna munhu anokwanisa kudarika miganhu yaakatarirwa naMwari. Hunhu hwevanhu hwekutadza hunoda kubviswa kubva pakuita kwahwo kwemakaro uye kungoda kuzadzisa shuwiro dzedu chete. Umwe nemumwe wedu anofanira kudzidza kugutsikana nemwero yatakatarirwa naMwari. Miganhu iyi yakakosha pakurarama kwedu. Sero rimwe nerimwe riri mumuviri medu rine miganhu pakukura uye basa raro mumuviri medu. Gomarara isero rakarwisa miganhu yaro, saka rinongokura nekuti rinongoda kukura. Mwari anoshandisa kuipa uye kukanganisa kuvakiridza nekuumbiridza kereke yake mukudarika kwenguva nomwe dzemakereke dzakasiyana-siyana, asi kwekupedzisira chivi kana kuipa pachange pasisina. Kusvika apa, kereke inofanira kugutsikana nekurwisa kuipa kwenguva yayo.
JEREMIA 5:22 Zvanzi naJehova; Hamundityi here? Hamudedere pamberi pangu here, ini ndakaisa jecha rive muganhu wegungwa ,ndikatema chirevo chisingaperi kuti rirege kuudarika? Zvino kunyange mafungu aro achidarika haangakundi.
Asiwo zvakadaro Mwari akaisirawo chakaipa muganhu. Chakaipa hachifi chakadzima chokwadi. Vatendi vangapararire asi chokwadi chinoparidzwa nekupararira kwavo. Vatendi vangapere simba asi vatsva vanomutswawo munzvimbo itsva. Munyu unoganhura kupararira kwekuora. Kuponesa vana vake, Mwari anoganhura kupararira nesimba rechakaipa. Chakaipa hachingoende chete negwara rachatenderwa naMwari. Kure, nepedyo. (maMongori akakurira Russia ne Europe yekumabvazuva mukugona kwavo kurwa nemukuru weuto Tsubodai. Mauto eHangari akabviswa. Europe yekumadokero yaive patsitsi nekuti Pope aitambisa simba rake pakurwisa mambo weRoma aive mutsvene, aive German. Zvino Ogedai, muMongori Khani aive mwanakomana waGenghis Khan, mushure mekutonga kwenguva duku kwemakore 12 chete akafa kupfurikidza kunwa zvakanyanyisa. Mwanakomana wake Guyuki akadzosa mauto ese kubva kuEurope kuuya kuMongoria kuzotora chinzvimbo chekuva mambo chaive na Chagatai, muvengi wake ari sekuru vake zvakare. Europe yaive panguva yakaoma yakaponeswa nekufa kwemunhu mumwechete kunyika yaive kure kure kuMongoria. Saka Mwari anoita nenzira dzake kuti hurongwa hwake huitike).
ISAYA 45:7 Ndini ndinoumba chiedza, nokusika rima; ndinoita rugare , nokusika njodzi: ndini Jehova anoita zvinhu izvi zvose.
AMOSI 3:6 Ko hwamanda ingarira muguta, vanhu vakasatya here? Guta ringawirwa nezvakaipa JEHOVA asina kuzviita here?
Kuita hudzamu mumufananidzo, munyori anoshandisa ruvara rwakajeka ruvara rwakadzima anorwushandisa pakuita mimvuri. Kujeka nekudzima zvose zviri mumaoko emunyori. Ruvara rumwe nerumwe rwakajeka kana rwakadzima rwune nzvimbo yarwo yakafanira pamufananidzo.
Kusika hunhu hwakadzama matiri Mwari anofanira kuisa muhupenyu hwedu zviitiko zvakajeka uye zvakadzima. Saka vanhu vakaipa nevakanaka vanoshandiswa naMwari kutiumbiridza. Vose vari pasi pedzoreredzo yake.
AMOSI 3:7 Zvirokwazvo, Ishe JEHOVA haangaiti chinhu, asina kumbozivisa varanda vake vaporofita zvakavanzika zvake.
Bhaibheri iBhuku rechiporofita, rinotipa mucherechedzo wezviitiko zvichauya.
ZVAKAZARURWA 13:1 Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa, chine nyanga dzine gumi nemisoro minomwe; napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine gumi, mapamusoro pemisoro yacho mazita ekumhura Mwari.
ZVAKAZARURWA 17:3 Ipapo wakandiisa kurenje mumweya, ndikavona mukadzi akatasva chikara chitsvuku, chizere namazita okumhura Mwari, chine misoro minomwe nenyanga gumi.
ZVAKAZARURWA 17:15 Zvino akati kwandiri: Mvura yawavona inogarwa nemhombwe, ndivo vanhu, navazhinji, namarudzi, nendimi.
Chaputa 13 yakatanga naJohane amire mumahombekombe egungwa. Nei? Chaputa 13 inopera nechiratidzo chechikara chinoyanana nemunhu nechiverengo chake 666. Jecha remumahombekombe megungwa hariverengeki. Izvi zvinoreva kuti vakarurama, vakamiririrwa nejecha regungwa, havangatori chiratidzo chechikara sezvo chiratidzo chichitsvaira mukati mevanhu vakawandisa vari panyika semasaisai anotsvaira mukati megungwa, zvinomiririra vasakarurama. Kune gungwa guru kupinda nyika. Kune vatadzi vazhinji kupinda vatsvene panyika.
ZVAKAZARURWA 13:16 Chinomanikidza vose vakuru navaduku, vafumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo mukati meruvoko rwavo rworudyi, kana pahuma yavo.
17 kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga nokutengesa, asi iye une chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho.
18 Ndipo panokuchenjera. Unoziva, ngaaverenge chiverengo chechikara; nokuti chiverengo ndechomunhu; chiverengo chacho ndimazana matanhatu nemakumi matanhatu nenhanhatu.
MATEO 15:8 Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi moyo yavo iri kure neni.
9 Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirairo yavanhu.
Iri ndiro dambudziko rine vanhu. Vanobva paMagwaro votambira tsika nechinyakare chevanhu zvinonyengera. Edza kutsvaga 25 Zvita muBhaibheri. Mateo 2 vhesi 11 inoti vazivi vakaenda mumba, kwete muchidyiro.
MATEO 2:11 Vakapinda mumba, vakawana Mwana naMaria mai vake, vakawira pasi vakamunamata, vakasunungura fuma yavo vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuwira nemura.
Josefa haana kutaurwa nezvake. Jesu aive asisiri rusvava muchidyiro, aive mwana mudiki ari mumba.
Vakapa zvipo kuna Jesu kwete kupanana ivo pachavo.
Tinotenga zveKisimusi tichitenga zvipo zvekupa hama neshamwari asi hazvina chekuita nezviri muBhaibheri. 25 Zvita riri pakati penguva yechando. Vafudzi havangadai vaive panze nemapoka avo sezvo vaizowoma nechando vakafa.
Vafudzi vega ndivo vakaenda kuchidyiro, kwete vazivi. Roma hayaiedza kubhadharisa mutero nguva yechando zvaizoita kuti Josefa naMaria vaite rwendo kuenda kuBheterehema muchando icho chaiita kuti nzira dzisafambike. Makadhi eKisimusi haasi zvekare muMagwaro. Kisimusi iEvangeri remakaro nekuzviunganidzira zvinhu sezvo harisi Evangeri raMateo naRuka. Apo vamwe vanhu vanoshandisa mari kusara vasina chinhu vachifunga kuti vari kuita chakanaka nechikonzero chechitendero. Ndira wozoita mwedzi unorwadza vanhu vachiedza kudzoreredza zvavakapfachura.
Nguva yeKisimusi inofadza asi haisi muMagwaro . Zuva iri rakabvepi? Mambo wechipegani weRoma Aurelian aive mukuru wemauto akachenjera, akabatanidza hushe hweRoma hwaive hwapatsanurwa muzvikamu zvitatu. Akapedza basa iri muna 274 AD akadzoka kuRoma uko akasvikoita 25 Zvita zuva rekuzvarwa kwamwari wavo wezuva ( sun god) vachibatanidzira nekupemberera kubatanidzwazve kwehushe hwavo. Mwari wemaPesia Mithras anopembererwa zvakare zuva rekuzvarwa kwake musi wa25 Zvita. Saka zuva iri rakatambirwa zvakanyanyisa sezuva remhemberero (zvikuru sei rakaremekedzwa sezuva rekufara). Zuva iri rakava rakatambirwa rikapararira kumitambo yemapegani zvekuti maKristu akabva abatanawo navo. Kumisa huwandu hwemaKristu aipemberera mitambo yemapegani, kereke yeCatholic kumakore a 350 AD, yakaita mhemberero dzekutsiva, vakatora zuva iri raive rekuzvarwa kwamwari wezuva wemapegani vakaridaidza kuti nderekuzvarwa kweMwanakomana waMwari (Son of God). Saka maKristu akapindawo muchipegani chikava chichechi chechi. Nekupindana kwemakore chiPegani chakatanga kupera muEurope kukazongosara chikamu chemaCatholic cha25 Zvita chichirarama, dzavanoti mhemberero dze (Christ's mass) kisimusi. Tinoda chose kutevera zvimwe zvinyakare zvinotikanganisa mafungiro kana vamwe vanhu vatinoona semagamba, kana kuva chikamu chekereke ine mbiri kana sangano pachinzvimbo chekutevera Jesu Kristu, Shoko. Zviitiko zvakakosha muCatholic vanozvidaidza kuti mass. Saka vakaita ravanoti zuva rekuzvarwa kwaKristu , Christ's mass. Iro rakazozivikanwa seKisimusi (Christmas). Asi vanhu vakazoonawo kuti harinei nechekuita naKristu vakacheka Kristu vakariti Xmas.
GENESISI 32:12 Ndimwi makati, zvirokwazvo ndichakuitira zvakanaka, ndichaitawo rudzi rwako sejecha regungwa risingagoni kuverengwa nekuwanda kwaro.
JEREMIA 33:22 Hondo yekudenga sezvaisingabviri kuverengeka, kana jecha regungwa kuyerwa, saizvozvo ndichawanza vana vaDavidi muranda wangu, navarevhi vanondishumira.
HOSEA 1:10 Kunyange zvakadaro kuwanda kwevana vaIsiraeri kuchaita sejecha regungwa, risingabviri kuyerwa kana kuverengwa; zvichaitika kuti paye pakange panzi kwavari, hamuzi vanhu vangu, ndipapo pazvichanzi kwavari, muri vanakomana vaMwari mupenyu.
Saka mahombekombe egungwa anomiririra vakarurama avo, sejecha regungwa, havangaverengeki uye havangatori chiratidzo kana chiverengo chechikara. Kugara muMagwaro ndicho chega chinhu chinotidzivisa kutora chiratidzo chechikara.
MATEO 13:2 Zvino vanhu vazhinji zhinji vakaungana kwaari, nokudaro akapinda mugwa. Akagara, vazhinji vakamira pamhenderekedzo.
Jesu aive muchikepe pamusoro pegungwa (ruzhinji rusina kugadzikika) kwete mugungwa. Varedzi vanoburitsa hove kubva mugungwa zvinoratidza kuporeswa. Vanhu vakamira mumhenderekedzo zvichimiririra vakarurama nekuti vaive vakateerera Jesu anova Shoko.
Kuteerera Magwaro ndicho chinhu chikuru chinoita kuti uve wakarurama.
MATEO 13:3 Ipapo akavaudza zvinhu zvizhinji nemifananidzo, akati; Tarira mukushi akabuda kunokusha.
4 Zvino pakukusha kwake, dzimwe mbeu dzakawira panzira, shiri dzikasvika dzikadzidya.
Nguva yekereke yekutanga yakatanga nekuparidzwa kweShoko. Mbeu iShoko raMwari. Shiri ndivo vavengi vakabvisa Shoko. Vakaritsiva netsika dzevanhu nezivo yevanhu.
5 Dzimwe dzakawira parukangarabwe. Padzakanga dzisinevhu zhinji, dzikamera pakarepo nekuti dzakanga dzisinevhu rakadzika.
6 Asi zuva rakati rabuda, dzikapiswa dzikaoma nekuti dzakanga dzisina mudzi wakareba.
7 Dzimwe dzikawira muminzwa, minzwa ikamera ikadzivhunga.
8 Asi dzimwe dzakawira muvhu rakanaka, dzikabereka zvibereko. Dzimwe zana, dzimwe makumi matanhatu, dzimwe makumi matatu.
9 Une nzeve dzekunzwa ngaanzwe.
Mufananidzo uyu unomiririra kereke yekutanga yakaitwa muhuvepo hwemaapostora. Vakakusha mbeu zvinomiririra kuparidza Shoko. Mukushi (muparidzi) haana kuzvidzwa apa. Ivhu, moyo wevakateerera, ndiyo yakazvidzwa.
RUKA 8:11 Zvino mufananidzo ndiwo; mbeu iShoko raMwari.
Mufananidzo wakati rebei zvichireva kuti Magwaro mazhinji akaparidzwa munguva yemapostora. Shiri dzakadya mbeu zvichireva vavengi. Mukushi haasi kuzvidzwa kuti akakusha zvakanaka here kana zvakaipa (kuparidza) zakanaka kana zvakaipa. Kuzvidzwa kuri paivhu rinomiririra moyo yevanzwi. Usacheme kuti munhu akuudza chokwadi nenzira isina kukuitira zvakanaka. Kuti mbeu yakakushwa sei hazvina zvazvinobatsira . Ivhu (moyo) payawira ndiro rinotariswa.
MATEO 13:10 Zvino vadzidzi vakauya, vakati kwaari; Munotaurireiko kwavari nemifananidzo?
11 Akapindura akati kwavari: Nokuti imi makapiwa kuziva zvakavanzika zvevushe hwokudenga asi ava havana.
Magwaro akanyorwa nenzira inonetsa kunzwisisa nemuverengi anongoverengawo zvake. Asi kana munhu achinge azvarwa patsva muMweya Mutsvene ndipo panokwanisa maziso ake emukati ezvemukati kuvhurika kuti vabatanidze Magwaro kuti vasvike pachokwadi.
Mwari achatumira mutumwa panguva yekupedzisira kuti asvikoburitsa pachena zvakavanzika zvake.
ZVAKAZARURWA 10:7 Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidza varanda vake ivo vaporofita.
Mutumwa uyu achange ariwo muporofita. Vachamuita nhume ari munhu panyama, kwete nhume yemweya sengirozi Gaburieri. Saka nesuwo tinodawo muporofita akazodzwa sezvaive zvakaita Pauro, Petro naJohane kuti vatidzidzise zvakavanzika kuti Mwari ambori ani uye kuti hurongwa hwake hweruponeso kumashure kwemakore 2 000 hunenge hwakaita sei nezvimwewo.
Mukereke yekutanga ndimo makatangira kuuraiwa kwemaKristu neRoma, kwakatangwa mamambo Nero uyo akapisa nzvimbo zhinji muRoma muna 64 AD kuti aivake patsva akabva apomera nekuuraya maKristu. MaKristu aimanikidzwa kusangana muchivande, kazhinji muzvikwata zviduku. Vaitarisira kutungamirirwa nemuapostora saka kurudziro yemuapositora nezvinyorwa zvaibva kwaari zvaive zviri nani uye zvakakosha kusvikira kumakore a 170 AD.
Chinangwa chavo chaive chisiri chekuvaka mapato emakereke makuru .
MABASA AVAAPOSTORA 8:4 Zvino avo vakaparadzirwa, vakapotenyika vachiparidza Shoko.
Kuparadzwa kweTemberi yemaJuda muna 70AD kwakabvisa nzvimbo yaizivikanwa yainamatira maKristu.
Misangano ichiitirwa mudzimba dzevanhu, kana mune imwewo zvayo kamuri yaikwanisa kuwanikwa, kana panze pamhepo pachena, hakuna zvivakwa zvakanaka zvaidiwa.(The pilgrim church by E H Broadbent page 3)
Justin Martyr (100- 165AD) akatanga kuturikira zvimwe zvinhu zviri muMagwaro nehwaro hwephirosofi yechiGiriki. Akanyora musiyano uye patsanuro inoonekwa pakati peMwanakomana naBaba avo vega vanova musiki naMwari wechokwadi. Haana kubvira ati Kristu ndiye “Mwari mumwechete wechokwadi”. Kristu sekuita kukuru kweMweya kunoshanda kuratidza huMwari (Shoko) ndeumwe Mwari asiri Baba, maererano naJustine Martyr, anoti “ mukuverenga, kwete muhurongwa”. Totenda kubasa nekurudziro yaJustine Martyr, mifungo yevanhu yaive yotanga kutsiva Magwaro.
Zvino vamwe vanhu vakaita saTertulian (160 -220 AD) aibva kuCarthage kumusoro kweAfrica vakava nembiri vakazvikwezvera vateveri kumashure kwavo. Zvido zveava vaizviti madzibaba emukereke zvakatanga kutsiva Magwaro. Vanhu vanobata mazwi evanhu vakangwara pachinzvimbo chekubata mazwi anobva muMagwaro. Tertulian ndiye akaita munyori wekutanga kunyora dzidziso yeTiriniti. Paainyora nezvaBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene akati, “Ava vatatu chinhu chimwe kwete munhu mumwechete”. Izwi rekuti “Tiriniti” harisi muMagwaro, asi vanhu havachine hanya nekurarama neMagwaro.
Vanhu vakachenjera vakatanga kukurira vanhu. Iyi tinoiti Nicoraitisimu,(Tsika dzavaNikoraiti) kusimudzwa kwemunhu anenge achinzi mutsvene pamusoro pe (laity) vanhuwo zvavo pachaunga. Sezvo vanhu vazhinji vakatanga kupindawo mukereke idzi, mirairo isiri muMagwaro yakagadzirwa kuitira kuti ave masangano anoendeka. Zvishoma nezvishoma kereke yakatanga kubva paBhaibheri, pahutungamiri hwevatariri vachiisa hutungamiriri hwemunhu mumwechete. Sezvo kereke yepanzvimbo yakatanga kutungamirirwa nemunhu mumwe pachinzvimbo chevatariri vakawanda, yaingova nguva chete vasati vati Bhishopu mumwe anotarira makereke akawanda. Hushe hweRoma hwaive nemametroporiteni aitarira mamwe marijeni ahwo. Kuita uku kwakatevedzerwa nemakereke, mameturoporiteni emakereke akapiwa masimba ekutarira chikwata chemaBhishopu erijeni kana purovhinzi. Izvi zvaive zvinzvimbo zvepamusoro-soro zvekuti vanhu vanoonekere vega ndivo vaipinda pasarudzo dzezvinzvimbo izvi. Nekuda kwekuda kuti masangano ave akarongeka paifanirwa kuva nemunhu mumwe anotungamirira pamusoro pavose. Saka nekukura kwekereke Kadinari aifanira kusarudzwa kuti atarire chikwata chemameturoporiteni. Danho rekupedzisira raive rekusarudza pope kuti ave pamusoro pemakadhinari. Rakava sangano rakarongeka, kunyange zvisina kubva muMagwaro rakabva rapararira pasi rese. Nicolaitanism (nico – kupamba vanhu) kuita chiprista chakasimba pakati paMwari nevanhu (laity vanhu vari musangano) chiripo zvachose. Kubva pamaonero evanhu inoita senzira yakanakisa yekubata basa raMwari asi sezvinei Mwari anovenga kuita uku.
ZVAKAZARURWA 2:6 Asi chinhu ichi unacho, kuti unovenga mabasa avaNikoraiti, andinovenga nenivo.
MATEO 15:9 Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirairo yavanhu.
Zvisinei nekuti zano rinoratidzika kuti rakanaka sei kwatiri vanhu, kana risina kubva muMagwaro rinotibvisa pamberi paMwari zviri nyore.
MATEO 13:12 Nokuti ani nani unazvo achapiwa kuti ave nezvakawanda. Asi ani nani asina uchatorerwa nezvaanazvo.
13 Naizvozvo ndinotaura kwavari nemifananidzo nokuti vanovona asi havavoni. Vanonzwa asi havanzwi kana kunzwisisa.
Jesu haana kubvira ada kuti Magwaro aturikirwe nenzira yehuchenjeri hwephirosofi yechiGiriki (ruzivo rwevanhu) kana kuti tishandise mazwi asiri muShoko akaita “seTiriniti” kuedza kutsanangura chokwadi. Saka vanhu vanoverenga Bhaibheri vosvibisa kunzwisisa kwavo nekuwedzera huchenjeri hwevanhu kana mifungo isingakwanisi kuturikira Magwaro maererano nemanwe Magwaro.
MATEO 13:14 Kuporofita kwaIsaya kwakaitika kwavari kunoti, nokunzwa muchanzwa, musingatongonzwisisi. Nokuvona muchaona musingatongoonesesi.
15 Nokuti moyo yavanhu ava yava mikukutu. Nzeve dzavo dzakadzivira; nameso avo vakaatsinzinya. Kuti zvimwe varege kuona nameso, nokunzwa nenzeve ,nokunzwisisa nomoyo. Vakadzoka ndivaporese.
16 Asi meso enyu akaropafadzwa nokuti anovona nenzeve dzenyu nokuti dzinonzwa.
Maapostora aigara achiita zvinorehwa neMagwaro. Pauro akaenda kuAthens kuti anotendeutsa maGiriki, kwete kunodzidza phirosofi kubva kwavari. Maapostora haana kubvira ashandisa izwi rekuti Tiriniti, Kisimusi, isita egi, isita bhani, achibhishopu, kadhinari, pope nemamwewo akadaro. Havana kubvira vashandisa izwi rekuti chechi vachireva chivakwa.
MATEO 13:17 Nokuti zvirokwazvo ndinoti, kwamuri kuti vaporofita navakarurama vazhinji vakanga vachida kuona zvinhu zvamunovona asi havana kuzvivona nokunzwa zvamunonzwa asi havana kuzvinzwa.
Zvino Jesu akapa vaapositora dudziro yemufananidzo sezvo vainzwisisa chokwadi. Chikamu chemakereke manomwe chaive chakavanzika zvekuti maJuda haana kuziva kuti chaive chikamu chehurongwa hwaMwari.
Tsananguro yaJesu iyi inotaura kuti kereke yekutanga yainzwisisa chokwadi cheMagwaro, totenda kubata kwemaapositora.
MATEO 13:18 Naizvozvo imi inzwai mufananidzo wemukushi.
19 Kana munhu akanzwa shoko rovushe, asingarinzwisisi, wakaipa unosvika ndokubvuta chakakushwa mumoyo make. Ndiye wakakushwa panzira.
Shiri dzinomisikidzwa sewakaipa, Diyabhorosi. Anouya nekurasisa kuzhinji asi pfungwa yake iri imwe, kutitadzisa kutenda kuBhaibheri. Kana ukashandisa mashoko asiri muMagwaro kutsanangura kutenda kwako, uri munzira yakarasika.
MATEO 13:20 Asi wakakushwa parukangarabwe, ndiye unonzwa Shoko ndokurigamuchira pakarepo nemufaro.
21 Asi haano mudzi mukati make. Ndiye wechinguva chiduku kana kutambudzika nokuvengwa zvichivuya nokuda kweShoko, pakarepo unogumburwa.
MaKristu asina kudzika midzi anoda chokwadi kana chiine mubairo chete. Kutambudzika kushaiwa mbiri kana kurwadziswa havakutambiri. Vanotenda mumharidzo dzekuwana nehupenyu hwakanaka. Mharidzo yekubudirira.
MATEO 13:22 Wakakushwa pakati peminzwa ndiye unonzwa Shoko zvino kufunganya kwenyika nekunyengera kwefuma zvinovhunga Shoko rikashaiwa zvibereko.
Iri evangeri rembiri uye makaro. Ndichabatira Mwari neshamwari dzangu nemhuri yangu muchechi mangu. Ndichabatira Mwari pamwechete nekuzadzisa shuwiro dzangu nekuzviitira mari nenzira dzangu. (zvinhu zvese zvinoitika zvinonyangadza zvine huwori vanoti “ibhizinesi”.)
MATEO 13:23 Wakakushwa muvhu rakanaka ndiye unonzwa Shoko akarinzwisisa. Ndiye unobereka zvibereko mumwe achiita zana, mumwe makumi matanhatu mumwe makumi matatu.
Chikamu chimwe muzvina chembeu ndicho chete chakawira muvhu rakanaka. Chikwata chimwe chaive chakanaka. Zvikwata zvitatu zvaive zvisina kunaka. Mumwechete achirwisana nevatatu. Mwari mumwechete Jesu Kristu achirwisana neTiriniti anova Mwari mumwe muvanhu vatatu.
Kereke yekutanga yakapera kumakore akapoteredza 170 AD pakadzikira kubata kwevaapostora kukauya huchenjeri hwevanhu nekuita kwavo kwakachenjera vakatora hutungamiriri hwekereke. Kereke yega-yega yaifanira kuva naBhishopu wayo aiitungamirira. Kuita uku kwakabvisa hutungamiriri hwevatariri vekereke panzvimbo.
Toenda pamufananidzo wechipiri.
Mufananidzo wekutanga takaupiwa ukatsanangurwa zvakazara. Izvi zvinoreva kuti kereke yekutanga yaive nechokwadi chizhinji.
Mufananidzo wechipiri wakati rebei (zvichiratidza kuti kwaive kuchiri nevanhu vakati wandei avo, mukati menguva yekutambudzwa kwavo, vaive vachiri kuda kuteerera Bhaibheri nekuritevera sezvarakanyorwa) asi hapana kupiwa tsananguro. Saka kunzwisisa chokwadi kwaive kwopera.
Saka chinyakare chevanhu, chiri pamashoko asimo muBhaibheri, kupira uye chinyakare zvaive zvoita kuti vanhu varasikirwe nechipo chekuona chokwadi chikuru chemuBhaibheri. Kusaziva nekusanzwisisa kwakaita guti rakatadzisa vanhu kuona Magwaro echokwadi. Kubata kwerima kwakatanga kudzima nekusvibisa chokwadi zvishoma nezvishoma zvekuti ruzivo rwevanhu rwakazotsiva kutenda pashoko kwevazhinji mushoko raMwari.
Pakawedzera makereke, simba ravo rekutanga rakasimudzirwa uye rikava rakafanana nezvenyika zvekuti kuita kwesimba renyika kwakawedzerawo.(the pilgrim Church by E.H Broadbent page 11)
Cyprian, akaberekwa kumakore akapoteredza 200 AD aishandisa shoko rekuti “Catholic chechi” zvakasununguka uye haana kuwana kupona kunze kwayo. Kereke iyi yaibvisa vose vaisaitsigira. Pakatanga kuita musiyano mukuru pakati pevatungamiriri nevanhuwo zvavo musangano. Vatungamiriri vaitonga vobva vapamba vanhu muchiitiko chavaiti Nikoraitisimu.
MATEO 13:24 Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti; Vushe hwekudenga hunofananidzwa nemunhu wakakusha mbeu yakanaka mumunda make.
25 Asi vanhu vavete muvengi wake akavuya, akakusha mashawi pakati pezviyo akaenda.
26 Asi chipande chakati chamera nokubereka, zvino mashawi akaonekwavo.
27 Zvino varanda vomwene weimba vakauya vakati kwaari; Ishe hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Munda wawanepiko mashawi?
28 Akati kwavari, muvengi waita izvozvo. Varanda vakati kwaari, ko munoda kuti tindouvunganidza here?
29 Akati kwete zvimwe kana muchivunganidza mashawi, mungadzura nezviyo.
30 Regai zvikure zvose zviri zviviri kusvikira pakucheka! Nenguva yekucheka ndichati kuvacheki, tangai kuvunganidza mashawi, muasunge mwanda kuti apiswe asi vunganidzai zviyo mudura rangu.
Chokwadi nekukanganisa zvinokwanisa kukura pamwechete. SaJudasi aive umwe wavadzidzi, saka vaparidzi vekukanganisa vanenge vatorimowo musangano. Varume vakangwara vane nzira dzavo dzakangwara vanokwanisa kupofomadza vazhinji kuti vasaone chokwadi.
Panguva yaOrigeni (184-253) kuAlexandiria akatora Tiriniti sechinhu chakakosha achibva atanga kuvaka chiKristu nenzira dzechipegani.
ChiKristu (kutenda kuBhaibheri) nechichechichechi (Churchianity) zvaikura pamwechete. Asi vanhu vaisaona chokwadi.
Kereke yechipiri yakapera apo Constantine akauraya vapikisi vake nevateveri vavo muhondo achibva ava mambo weRoma achizviti muKristu achibva amisa kuuraiwa kwemaKristu mugore ra 312 AD. Tichitanga namambo Nero muna 64 AD, madzimambo eRoma akavamba zviitiko zvaisvika gumi vachiuraya maKristu pakafa vanhu vaisvika 3 miriyoni muchiitiko ichi kusvikira vamiswa kuuraya vanhu naConstantine.
Jesu haana kupa tsananguro pakupera kwemufananidzo wechipiri uyo unoreva kuti kereke yaive yabva pachiedza, Shoko ichinopinda murima. Chichechi chechi chaive chatanga kutsiva chiKristu. Chinyakare chichitsiva Magwaro.
MATEO 13:31 Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti; Vushe hwekudenga hwakafanana nembeu yemastarda yakatorwa nemunhu akaidzvara mumunda make.
32 Iyo iduku kumbeu dzose asi kana yokura ihuru pamirivo yose. Inoita muti wakakura ukadaro kuti shiri dzokudenga dzinovuya dzichigara pamatavi awo.
Mashoko mashoma akanyorwa pamufananidzo uyu. Izvi zvinoreva kuti chokwadi cheBhaibheri changanga chatanga kufa.
Shiri dzaive vavengi mumufananidzo wekutanga ndidzo dzave kutonga mukereke. Muti mukuru kana sangano rasimuka rinova chipingaidzo chechokwadi. Mastarda inofanira kuva murivo muduku kwete muti mukuru une mapazi asimo muMagwaro akaita semaAchibhishopu, maKadhinari, mapopu kuitira kuti vavengi vechokwadi vawane pekugara. Kereke yekutanga yaive nevanhu vashoma vaiwanzosanganirana mudzimba, kunyanya apo pavaiuraiwa nekuparadzwa sezvavaiwanzoitwa. Zvishoma nezvishoma izvi zvakashanduka kuve mubatanidzwa wezvematongerwo enyika nezvechitendero uri pasi pevabati vezvigaro vasina kumbotaurwa nezvavo muBhaibheri.
Constantine akapa bhishopu weRoma muzinda weLaterani pamwechete nepfuma zhinji yakabva muhomwe yeRoma. Bhishopu weRoma akava munhu waConstantine akasimba kumadokero pakatuta Constantine achiisa muzinda wake mukuru kumabvirazuva kuConstantinople. Saka Bhishopu akazviwanirawo chikamu mune zvematongerwo enyika. Chitendero nezvematongerwo enyika wakagara uri musanganiswa wakaipa unofanirwa kudzivirirwa.
Hazvina kutorwa sezvakaipa kuti guta rive naBhishopu mumwechete. Maguta aive akambosvikwa nemaapostora akapihwa kukosha kukuru zvekuti mabhishopu awo aikudzwa zvakanyanya. Pavaikwikwidzana kupfurikidza simba zhinji uye rukudzo mabhishopu eRoma, Antiyokia, Jerusarem, neAlexandiria vakatanga kuva nesimba zhinji nekukonzeresa kukuru. Ndivo vaive varume vakuru vakuru vaive nesimba nenyembe dzese.
Muna 378 AD Theodosiusi akaita mambo akabvuma kuti mapegani aurayiwe. Kumakore akapoteredza 450 AD pope Leo vakakudza chiitiko ichi kusvikira pakuuraiwa kwemaKristu vaisatenderana nekereke yeCatholic.
Nguva yekereke yechitatu yakapere kumakore akapoteredza 600 AD panguva iyi bhishopu weRoma aive ave kuzviti bhishopu wepasi rese ane simba pamusoro pechiKristu chese.
MATEO 13:33 Akavavudza mumwe mufananidzo akati; Vushe whokudenga hwakafanana nembiriso yakatorwa nomukadzi akaiisa muzviyero zvitatu zvovupfu kusvikira hwese hwaviriswa.
Mufananidzo uyu une maShoko mashoma kuutsanangura. Vhesi rimwe chete. Unomiririra nguva yerima. Pakwaive neShoko shoma mumakereke aivepo, yakararama kubva muna 600 kusvika muna 1500 AD. Kereke yechina muna Zvakazarurwa chaputa 3 inodaidzwa kunzi Tiyatira zvichireva kuti mukadzi anotonga. Kereke yeRoman Catholic apa yaive yatora hushe pamusoro pevanhu.
Gore 620 AD richangopfuura, maMosiremu paakapamba Antiyokia, Jerusarema neAlexandiria zvakasiya Roma sechikamu chepakati nepakati kumadokero chaive chakabatanidzwa nemuapostora. Pasisina vamwe vayaive navo pamakwikwi bhishopu weRoma akava nekukonzeresa kukuru uye nemasimba akanyanya.
Kuurayiwa kwevanhu kwakawedzera apo kereke yeRoma yaiedza kubvisa vapikisi vese. Panguva yavakazomira kuuraya vaivapikisa vaive vauraya vanhu vaisvika 68 miriyoni vaive vasiri maCatholic. “Kudya” kunoita chingwa chinomiririra Magwaro. Mukadzi anomiririra kereke. Mbiriso inofanira kuora apo inoita cabhoni dhayokusaidhi inosimuka segasi painovidza hupfu. Saka mukadzi ( kereke yeCatholic) yakatora kudya (Shoko) ikaripatsanura muzvikamu ( Tiriniti yakapatsanura Mwari kuti ave vanhu vatatu) kusvikira kuora uku kwapararira muShoko rese. Totenda dzidziso yeTiriniti maKristu haachaziva zita raMwari (Jesu Kristu) saka vanobhabhatidzwa mumazita ezvinzvimbo Baba Mwanakomana naMweya.
Mutsvene pachinzimbo chemuzita raJesu Kristu. Jesu Kristu ndiro zita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene . Kutadza kuri kuramba kuchipararira zvoita kuti vanhu vasanzwisise chokwadi.
MATEO 13:34 Zvinhu zvose Jesu akavudza vanhu vazhinji nemifananidzo. Haana kutaura chinhu kwavari asinemifananidzo.
35 Kuti zviitike zvakarehwa nomuporofita achiti, ndichashamisa muromo wangu nomufananidzo. Ndichataura zvakanga zvakavanzika kubva pakuvamba kwenyika. Kududzirwa kwemufananidzo wemashawi nezviyo.
36 Zvino Jesu akati aendesa vanhu vazhinji, akapinda mumba. Vadzidzi vake vakauya kwaari vakati, tiudzei mufananidzo wemashawi omunda.
MATEO 13 :37 Akapindura akati, unokusha mbeu yakanaka ndiye Mwanakomana womunhu.
38 Munda inyika, mbeu yakanaka ndivo vanakomana vovushe. Mashawi ndivo vanakomana vowakaipa.
39 Muvengi akakusha ndiye Dhiyabhorosi, kucheka ndiko kuguma kwenyika, vacheki ndivo vatumwa.
40 Zvino mashawi sezvaanovunganidzwa achipiswa mumoto ndizvo zvichaitwa pakuguma kwenyika. (nguva yeKutambudzika kukuru ndiyo inotara magumo ekereke yechinomwe)
41 Mwanakomana womunhu uchatuma vatumwa vake vagovunganidza muvushe hwake zvose zvinogumbusa navanoita zvisakarurama. (vachiita zvinhu zvavanoziva kuti zvakaipa)
42 Vachavakandira muvira romoto. Ipapo pachava nokugeda-geda kwameno. (nguva yeKutambudzika kukuru)
43 Ipapo vakarurama vachapenya sezuva muhushe hwaBaba vavo. Une nzeve dzokunzwa ngaanzwe.
Pakaperepa mufananidzo wechina, Jesu akatanga kutsanangura zvakaitika mukereke yechipiri apo kereke yeCatholic yakazvuzvurudza chiKristu ichichiisa mukukanganisa. Saka pakupera kwenguva yekereke yechina, pakupera kwenguva yerima kana nguva yepakati (middle ages) vanhu vakaita saHuss naWycliffe vakauya mudariro nechiedza chakakwana kuti vadzose maKristu kuruponeso uye kuti vazivise vanhu kuti kereke yeRoman Catholic ndiyo muvengi wekubvira kare wechokwadi.
MATEO 13:44 Vushe hwekudenga hwakafanana nefuma yakavanzwa mumunda. Iyo yakawanikwa nemunhu akaivanzazve . Zvino nokufara kwake unoenda, akatengesa zvose zvaanazvo akatenga munda uyo.
Vhesi rimwechete ndiro rinotsanangura nguva iyi. Saka hakuna chokwadi chizhinji chakadzoswa panguva iyi. Asi Luther, mushingi pavamutsiridzi vese, akamutsiridza chokwadi cheruponeso sechiitiko chepakati pake naKristu. Vanhu havana kuparadzana nedzidziso dzakawanda dzekereke yeCatholic dzaive dzisiri muMagwaro , asi vakawana Kristu saIshe nemuponesi wavo. Saka yaive nhano huru vanhu vachienda mberi.
Murume ari kurehwa muMagwaro ndiKristu. Iye, paCalvari, akaripira zvivi zvenyika yese. Ndipo paakatenga nyika (munda). Akatengesa kukudzwa kwake kwese kwekudenga kuti ave muranda anotambudzika akatengesa chese chaiita kuti ave nechiremerera nekufa rufu rwaishoreka. Saka akaripira muripo wese, nekupa hupenyu hwake. Zvino akaviga fuma inova ruponeso. Ruponeso harukwanisi kutengwa. Saka vanhu vanoverenga Bhaibheri asi votadza kuona chinhu chakakosha kuti vanofanirwa kuponeswa. Kuwana ruponeso kubva kuna Kristu paumwe neumwe ndiyo pfuma yakavanzwa inowanikwa kubva muMagwaro. Ndeyemahara nekuti haikwanisi kutengwa. Asi Mwari akada nyika kwazvo zvekuti akaripira kuipa kwenyika yese (munda). Saka chero munhu anokwanisa kuponeswa.
Rumwe rutivi rweizwi rinoti “fuma yakavanzwa” (treasure) kwaive kuturikirwa kweBhaibheri mumutauro wakajairika pachinzvimbo chekuva muLatini iyo inofadza maRoman Catholic. Gwaro reKing James Vesion reBhaibheri rakanyorwa munana 1610 AD nanhasi richiri kuonekwa sechiwanikwa chakakosha kuchitauro chechirungu. Zvekuti mapato echiKristu ese akazotevera akatangira munyika dzinotaurwa chirungu.
[Makore akapoteredza 1750 AD John Wesley akaparidza hutsvene akafamba nzvimbo muEngirendi zvakaita nheyo dzekutanga kwenguva yemaMishinari iyo yakatanga makore mashoma 1800 isati yasvika.
Munana 1906 mutsiridzo yePentecosti iyo yakatangira kuAmerica yakadzosa rubapatidzo rweMweya Mutsvene kuvatendi muumwe neumwe.
Kubva muna 1947 kusvika muna 1965 Wiliam Branham, aive kuAmerica zvakare, akatambanudza muono wakadzama muMagwaro uyo wakapa mufananidzo mukuru uyo wakabatanidza Magwaro ayo ainzi airwisana pamwechete. Chokwadi chaicho chakabva chadzoswa panzvimbo kune avo vanhu vaikwanisa kufunga nenzira yakasiyana kubva kune vatungamiri vekereke yavo uye kuchinyakare chekereke yavo.]
asi mumazuva erumutsiridzo rwukuru rwa Luther, tingati kubva muna 1500 kunosvika kunana 1750 AD kwaive nekusakwanira kweShoko raisvika kuvanhu pasi rese. Vamutsiridzi vakaita saLuther, Calvin, John Knox vakabata basa rakanaka tichitaura nezveIvhangeri muEurope.
Asi paive nematambudziko makuru maviri: ko dzimwe nzvimbo dzese dzepasi rino? Ko chimwe chokwadi chese chavaive vasati vazarurirwa nekuziva?
Kubuda munguva yerima nyika yaida chokwadi chikuru cheruponeso pamwechete neBhaibheri mumitauro yavo. Asi vanhu vaidawo hutsvene (uhwo hwaizoparidzwa naJohn Wesley) nerubapatidzo rweMweya Mutsvene (rwaizodzoswa nevemaPentecosti). Vanhu aidawo chokwadi kuitira kuti vasarambe vachishandisa mazwi asiri emuBhaibheri akaita serekuti Tiriniti kutsanangura Mwari uyezve kuti vasanyengerwe kuti vafunge kuti “Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene” izita. Tinodawo kuziva kuti chivi chekutanga chaicho chaive chii uye kuti Antikristu ndiyani. William Branham anokwanisa kudzika nesu kunzira iyoyo yakaomarara.
Vamutsiridzi vakapunyuka kubva kuRoma uye kusimba rapope asi vateveri vavo (saJakobo nekuba kwaakaita vamwari vaatezvara vake) vakasaruda kutongwa nehutungamiri hwevanhu uye, semuenzaniso, kereke yeAgirican yakatambira Henry VIII, uyo aiita hupombwe nehumhondi, semutungamiri wekereke uye murwiri wekutenda. Vakaita vavo vapirisita vaive nezvishongo zvemitambo vachitevedzera vaprista veCatholic . Vamutsiridzi vakapunyuka (Sadhisi zvinoreva kuti vakapunyuka) kubva kuRoma asi mutsiridzo haina kuzozadziswa nekuti vateveri vavo havana kungwarira kuti vaenderere mberi naMwari vakangodzosera chimiro cheCatholic chekuisa munhu pamusoro kuti avatungamirire icho, zvisinei nemisiyano yaivepo, pasina nguva refu vakatora vakashandisa zvaishandiswa neCatholic zvakaita seTiriniti, kubhabhatidza muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene, kutungamirirwa nemunhu (muprista kana mufudzi pasita) uyo anotonga kereke nesimba rake rekutambira kana kudzinga munhu kubva mukereke. Kuteerera nekuzvipira kumutungamiri wekereke kwakava chipingaidzo chikuru chekutambira chokwadi chaienderera mberi apo Mwari aichiburitsa pachena.
MATEO 13:45 Hushe hwekudenga hwakafanana nemutengi anotsvaga maparera akanaka.
46 Akati awana parera rimwe rinomutengo mukuru akaenda, akandotengesa zvose zvaakanga anazvo. Akaritenga iro.
Chokwadi chakati wandei chakadzoswa kukereke sezvo mufananidzo uyu une mavhesi maviri.
Munda wakatengwa mumufananidzo wadarika kuti usazokwanisa kutengwa zvakare. John Wesley akazarura musuwo kuhuvhangeri kunze kwezvivakwa zvatinoti makereke izvi zvakasvitsa kunguva huru yemamishinari iyo yakatanga kumakore akapoteredza 1800 AD.
Kuna Zvakazarurwa parera musuwo wekunopinda muguta dzvene rekudenga.
ZVAKAZARURWA 21:21 Masuvo ane gumi namaviri akange ari amaparera ane gumi namaviri: suvo rimwe nerimwe rakanga riri reparera rimwe; nzira yomuguta yakanga iri yendarama yakaisvonaka inoita seinovonekera.
ZVAKAZARURWA 3:8 Ndinoziva mabasa ako, (tarira ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka, hakuna ungagona kuupfiga) kuti une simba shoma hako ; wakachengeta Shoko rangu, ukasaramba zita rangu.
Munguva yekereke yechitanhatu Firadherfia (rudo pakati pehama munaShe) kereke yaive nemusuvo wakazarurwa pamberi payo. Musuwo ndiwo unomiririra mabasa emamishinari. Saka Kristu akafa paCalvari kuti atenge kodzero dzenguva yemamishinari kuti dzizadziswe. Aizomutsa mamishinari aizoparidza Evangeri reruponeso kuvanhu muzita raJesu Kristu kunyangwe kwaive kuchiri nekukanganisa kukuru mune zvaitendwa nemaKristu.
Nguva yemagamba yemamishinari, zvisine nekuoma kwazvakanga zvakaita, yakakandira chikamu chechiedza kunyika. Iyi ndiyo yaive nguva yakanakisa yerudo pakati pehama munaShe (Firadherfia) apo ruponeso rwakapararira kune dzimwe nyika uye mharidzo yaJohn Wesley yehutsvene yakakwidziridza hwaro hwehunhu hwevanhu. Zvikurusa zvekuti vapanduki vemasangano vakabuda muCatholic vekuEngirendi vakasiyana neshanduko yechiFrenchi iyo yakasiya yaparadza chiCatholic chekuFrance. Hakuna mumwechete aida kurarama ari mutsvene aizoshandisa muchina wekuuraya kugura vanhu misoro, kana kungomirawo zvake achiona izvi.
“ukasaramba zita rangu”. Mamishinari aikoshesa zita raJesu Kristu. Hakuna imwe nzira yeruponeso. Kukoshesa zita raJesu uku kwakatanga kuzarura musuwo wekuonekwa kwakadzama kweMagwaro, chinhu chekuti Jesu ndiye Ishe uye hakuna chinhu chinonzi Tiriniti. Chokwadi chakadzama chinonetsa kutambira kana vanhu vari muhutefe-tefe hwemakereke avo. Asi musuwo wezaruriro yakadzama wakatanga kuzaruka, uchiburitsa pachena kuti Jesu ndiye Ishe Mwari Mutsvene. Chimwe chokwadi chakadzama chaive chekuti chitendero chemasangano chiratidzo chechikara, kutevera vafundisi munzira dzavo dzinova musanganiswa wechokwadi nekutadza. Havakwanisi kugadziriswa pavatadza nekuti vanoramba mamwe maonero asiri avo ivo. Chimwe chokwadi chakazarurwa chinonetsa kutambira ndechekuti bonde ndiro raive chitadzo chekutanga. Satani akanga akapofomadza vanhu kuti vasaone chokwadi ichi. Varume vechiMosiremu vanorarama vachitenda kuti kune mhandara makumi manomwe dzakavamirira kudenga. Izvi zvinokurudzira vazhinji vavo kuti vazviuraye kupfurikidza kutakura mabhomba pamiviri yavo vachinoaputitsira pavanhu kuti vagonotambira mubairo uyu wakavamirira kudenga. Vanokanganwa chinhu chikuru chimwechete. Murairo mukuru unoramba uchiti: usauraya.
Nguva yemamishinari yaive yakanakisa asi yaive isina zvinhu zviviri: rubapatidzo rweMweya Mutsvene uye chokwadi chakazara cheMagwaro icho chaizoonekwa kana musuwo wazarurwa.
Onai kuti vachiriko maKristu akawanda sei anoti “mune chakakanganiswa muBhaibheri” pavanoedza kugadzirisa Magwaro anoita seanopikisana. Hamuna chakakanganiswa muBhaibheri reKing James vhezheni. Rinoramba riri rakakwana. Chakakanganiswa chinoramba chiri mukusaziva kwedu, kushaiwa kwedu kuona mufananidzo mukuru uri kuseri kweMagwaro ese. Iri raikwanisa kuramba riri dambudziko kusvikira pakazotanga kuburitsa William Branham maonero aaiita Magwaro ayo aive akasiyana. Gondo rine chipo chekuti ziso raro rinoona zvakapetwa ruviri. Denderedzwa rekunze rinoita kuti mufananidzo mukuru warinoona urambe uri panzvimbo. Chikamu chemukati cheziso raro chinokwanisa kukudza chinhu zvingapetwe kagumi zvinoriita kuti rikwanise kuona zvisingakwanisi kuonekwa nedzimwe shiri kana riri mudenga.
Nguva yeShumba yakazivisa chokwadi cheBhaibheri naSt Pauro nemamwe maapostora. Nguva yedhonza remombe yakaona maKristu mazhinji vachiurairwa kutenda kwavo munguva yerima. Nguva yemunhu ndiyo yakakomborerwa vanhu kuti vakwanise kuva nesimba rekushandura Bhaibheri kuriisa muKing James vhezheni. Nguva yekupedzisira nguva yegondo , yakaona simba kubva kudenga richiuya panyika paPentecosti riri parubapatidzo rweMudzimu Unoyera. Asi vanhu nenjere dzavo vakapatsanura kuita ikoko mumasangano ePentecostal anotongwa nevafundisi. Zvino muporofita, William Branham, akadzosa chokwadi chekare cheMagwaro chekereke yekutanga nemuonero wake weMweya muMagwaro. Asi vaimutevera vakangoendawo nzira imwechete inosuwisa iyoyo yekupatsanurana kuva masangano anotongwa nevafundisi anotaura zvaakataura. Saka nguva yekereke yekupedzisira, mufananidzo wechinomwe, wakagadzirira kuburitsa zvese pachena. Kunze zvinooneka zvakanaka uye zviine budiriro asi pachokwadi kereke yekupedzisira iri pachimiro chakaipa.
MATEO 13:47 Vushe hwekudenga hwakafanana norutava rwunokandirwa mugungwa. Rwunovunganidza marudzi ose ehove.
Gungwa vanhu vazhinji vasina kugadzikika. Rutava rweShoko rwunoenda rwounganidza marudzi ose evanhu. Shoko “rutava” rune imwe dudziro yakawedzera yeinterneti, apo vanhu vese vanobva nzvimbo dzese dzepasi rino vanokwanisa kuona chokwadi.
MATEO 13:48 Kana rwazara vorunokovera pamhenderekedzo. Vakagara pasi vakavunganidzira dzakanaka mumidziyo asi dzakaipa vakadzirasha.
Sevaredzi vehove, dziwe dzehove dzakanaka dzimwe hadzina. Vamwe vanhu vanoteerera chokwadi asi vamwe havateereri. Vanofunga kuti vanenge vachiramba chokwadi asi ndivo vanenge vachirambwa nechokwadi.
MATEO 13:49 Ndizvo zvichaitwa pakuguma kwenyika. Vatumwa vachabuda, vachabudisa vakaipa pakati pevakarurama.
Hondo huru iri pamweya apo anenge ari Mwari achirwa naSatani. Nyama yakangoti darikei mumvuri wehondo chaiyo yemweya. Tinofunga kuti tinobatira Mwari asi vatumwa vanoita basa guru rekutiparadzanisa nezvakaipa nekutiita kuti tirambe tiri munzira yakanaka. Munguva ino inorasisa uye inonyengera, tinotoda rubatsiro rwese rwatingawane.
MATEO 13:50 Vachavakandira muvira remoto. Ipapo pachava nokuchema nokugeda-geda kwameno.
Avo vanoramba chokwadi vachapedzisira vave mukutambudzika kukuru uko kunopedzisa nguva yekereke yechinomwe.
MATEO 13:51 [Jesu akati kwavari:] manzwisisa izvozvo zvose here ? Vakati kwaari, hongu Ishe.
Munguva yekereke yechinomwe, totenda kuzaruriro yakaburitswa pachena naWilliam Branham, kunzwisisa Magwaro kwakadzoka kuitira kuti kereke yekupedzisira ikwanise kuva nekutenda kwakakosha kwakafanana nekwaivepo mukereke yekutanga.
MATEO 13:52 Akati kwavari, naizvozvo munyori mumwe nomumwe akadzidziswa zvovushe hwokudenga vakafanana nomunhu, mwene weimba unobudisa zvinhu zvitsva nezvitsaru pafuma yake.
Kereke yekupedzisira inofanira kunzwisisa zviitiko zvose zvitsva semaJuda anodzokera kuIsiraeri pamwechete naHerija uyo achatidzosera kukereke yekutanga kuti tikwanise kubatira Mwari nenzira imwe nekunzwisisa kumwe kwavakaita mumazuva ekare.
MATEO 13:53 Jesu wakati apedza mifananidzo iyo akabvapo.
Kereke yechinomwe ichapera pachadzoka Jesu kuti atore Mwenga wake, kereke yechokwadi, oyenda naye kudenga kumabiko emuchato.
Vese vanosara vanoenda muKunotamudzika kukuru. Ndapota musawanikwe muri pakati peava kunyangwe vari ndivo vazhinjisa. Asi havana kure kwavanosvika.